3.1 Sida aad u dar subtitles =
Ku dhawaad ​​qof kasta oo uu ku jiray xaalad marka aadan sugi karin inuu ciyaaro dhacdadii ugu danbeeysay ee show aad jeceshahay, laakiin subtitles ee aan shaqayn. Haddii aad ku jirto sida qorbaha ah, isticmaal mid ka mid ah kuwan soo socda converters Cinwaan.
1. Dufcaddii Cinwaan Converter
Dufcaddii subtitles Converter waa qalab loogu talagalay in lagu badalo anfacaya files Cinwaan in ka badan 100 qaabab, oo ay ku jiraan MKV, MKS iyo qaar badan. Waa maxay fantastik ah oo ku saabsan barnaamijkan ku haboon waa in ay Deji taageerada loo dejiyay oo ay weheliyaan heerka jir. Waa sida ugu fudud ee ku daray gabay in liiska ciyaar aad, kaliya jiidi oo hoos u faylka galay Converter Dufcaddii. Haddii aad qabto wax la door gaar ah, qabsato fursadaha diinta ama kaliya gudub hawlaha qaab beddelidda. Khariidad ee barnaamijka waa user-friendly ma sidaas u baahan tahay si aad u Galliani IT si ay u maareeyaan ah.
2. Jidka sub
Fudud kale si ay u isticmaalaan, weli Converter wax ku ool ah waa SubC. Waxa ay taageertaa MicroDVD, SubRip, xarumo Alpha iyo SubViewer 2.0 files. Barnaamijku waxa uu u taagan la muuqaalada tafatirka ay iman kara ee ku anfacaya. On top of in aad si fudud u qabsato karaa waqtiga faylasha in laga takhaluso oo ka mid ah dib u daalin. Barnaamijkan heer sare ah loo qaadan karaa wadid tijaabo aan rakibo ah.
3. Cavena qalabeed
Haddii aad jeceshahay in ay helaan sifaatka aad u sareeya ka badan, xagliyaan Cavena qalabeed. Diinta iyo muuqaalada tafatirka ayaa dhamaantood ku soo duudduubtay mid. Iyada oo ay taasi gabal multi-functional of software aad u bedeli karaan faylasha text galay qaabab file Cinwaan iyo qeybsanaan ku xigeenka. All oo ka mid ah qaabab TV oo caan ah ayaa lagu taageeraa oo ay la socdaan qaar ka mid ah kuwa ka yar caadi ah. Qalabeed Cavena waxay bixisaa qaab beddelidda, 30, 30DF, 25, 24 iyo xeerarka kale mar la qabto ama joog iyo jiif saxda ah. Barnaamijka waxaa ku jira software ee diyaarinta subtitles Tempo ah, laakiin waxa laga iibsan karaa sida u taagan wax soo saarka ah oo keliya qiimo macquul ah. Hubi goobta rasmiga ah ee xayaysiinta dhimis.
4. SRT Cinwaan Converter (ASCII in UTF8)
Barnaamijkan waxaad badbaadin kartaa madax xanuun haddii dhibaato la arkaysid Faarisi ama Carabi subtitles SRT aad leedahay. Maxaa sameeyaa waa beddelo Deji ka ASCII in UTF8 si subtitles waxaa lagu soo bandhigaa si sax ah. Ka hor inta aanad hore u socon aad u baahan tahay si loo soo dajiyo Java Standard Edition (SE). Tani waa xidhmo software bixiya Java Runtime deegaanka iyo maktabadaha iyo qaybaha loo baahan yahay si ay u wadaan barnaamijyo badan iyo content Web hoos 32-yara Windows kumbiyuutarada ah.
5. Easy Cinwaan Converter
Haddii aad jeceshahay gabal fudud ee software si loogu badalo subtitles Easy Cinwaan Converter waa jawaabta. Hawlaha qaab beddelidda waa tooska u socda; kaliya aad isticmaasho '' jiita iyo hoos '' shaqo iyo aad tahay kitaabkii duudduubnaa. Feature ugu wanaagsan ee barnaamijka waa in aanu u baahnayn in la rakibo wax, aad u ordi karaan kombiyuutarada badan la isticmaalayo qalab saari karo. Khasaare kaliya ee waa inaadan la cayimi kartaa buugga wax soo saarka ah oo ka duwan tahay isha.
Tani waa Converter internetka Cinwaan in ku yimaado anfacaya marka aad raadinayso kaliya hawlaha aasaasiga ah. Waxaad bedelan kartaa luqadda ee goobta si Japan, Jarmalka, Talyaaniga, Holland, Malay iyo Ingiriisi dabcan. Qaabab Wareejinta waxaa ay taageerayaan goobta waxaa ka mid ah .txt (MicroDVD), .sub (MicroDVD), .srt (SubRip), .mpl. Intaa waxaa dheer, in aad qabsato karaa xawaaraha lugahooda halkii labaad (FPS). Waxaa lagu wadaa in 25,000 laguugu sahlo laakiin waxaa gacanta maasuqay karo. Ka dib marka aad geliyaan file ah, soo qaado afka iyo aad diyaar u tahay in ay tagaan. Haddii aad tahay gaaban waqtiga, taasi waa fursad macquul ah laakiin maanka ku hayo in ay ka shaqeynayaan waa soo doonteen.
7. Cinwaan Converter
Halkan waa codsiyada yar ee ku caashaqi jiray Mac u baahan in xal u ah dhibaatooyin ka Cinwaan ay. Ogaanshaha Automatic ah Deji xaqa waa mid ka mid ah abaalmarinno ay bixiyaan qalab this. Iska ilow subtitles ka didaan in muuqan kasta oo mar mar ayey. Interface user waxaa wakiil ka daaqad kaliya in ay taageertaa shaqada jiita iyo dhibicda. Daal wax ka qabashada Halkii Mambo technofest ah? Tani kaliya aad u.
8. Cinwaan awooddiisa
Halkan yimaado qalab yaab online in faantaa ay miday; wax walba oo ka soo wareegaya qaabab, qaybsama iyo isku subtitles in la qabsado heerka haddii aysan beego waqtiga filimka. Feature qiimihiisu kale xusay waa ka kaxayntu ay si toos ah HTML sida ama. Kharash dhowr daqiiqo xitaa iyada oo loo marayo qaababka si aad u hesho ugu soo baxay waxaa ka mid ah. Horumarinta waxay u furan yihiin talooyin si haddii aad fikrado hayso si xor ah ay u diraan ka badan.
9. Cinwaan Edit
Cinwaan Edit waa mid ka mid ah qalabka kaalinta ugu sareysa sida ay blogs casriga ah. Users raaxaystaan ​​faa'iidooyinka interface fudud laakiin functional. Cinwaan Edit laga beddeli karaa, si loo waafajiyo kasta oo uu doorbidayo ayaa user. Waxa intaa dheer in subtitles diinta, waxa ay bixisaa muuqaalada tafatirka. Waxaad dooran kartaa ka kala duwan oo qaabab Cinwaan taageeray. Haddii aad tahay lover Customization madal, barnaamijkan waa in sare ee liiska mudnaanta aad.
Magaca barnaamijka iska hadlaayo, ay muuqato diinta Cinwaan ee ilmaha ku ciyaaraan. Samee files cashayn ka xoq la qasabno yar. By degsado piece light of this software, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u abuuraan files hoosaad ka xoq.
3 siyaabood oo loo badalo si mts MOV on Mac
Sida loo Beddelaan mts in wmv daaqadaha (dariishadaha 10 ka mid ah)
Sida loo Beddelaan AVCHD in MPEG
Sida loo rogo ama Guba iyo YouTube in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Top 10 Cinwaan converters